avy amin'ny admin tamin'ny 05-06-21
Ny fivoaran'ny indostrian'ny gorodona plastika vato any Shina dia nanomboka nihamatotra tsikelikely, ary ny làlan'ny fananganana kolontsaina marika an'ny orinasa kely sasany sy salantsalany dia miroso amin'ny dingana sarotra ihany koa. Fananganana fitantanana marika, marketing marketing ...
Ny fanavaozana sy fampidirana feno ny gorodona PVC dia mety hampisy fifaninanana eo amin'ny tsena
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka ny fitaovana gorodona, ny olona dia tsy voafetra intsony amin'ny gorodona. Ho fanampin'ny gorodona, ny gorodona PVC dia afaka mamaly tsikelikely ny filan'ny mpanjifa amin'ny fahasalaman'ny atmosfera. Fanatsarana tanteraka ny PV ...
avy amin'ny admin tamin'ny 04-06-21
Ny gorodona plastika amin'izao fotoana izao dia fitaovana fiarovana fiarovana tontolo iainana maitso haitao avo lenta amin'ny fitaovana manerantany. Hatramin'ny nampidirana ny gorodona plastika teto amin'ny firenentsika dia dimy na enin-taona no fampandrosoana. Andrasana ny ho avy ...